कुवेत लैजान्छु भन्दै दिल्ली लगेर ३ जना महिलालाई ब’न्धक ! – Khabar PatrikaNp
काठमाडौं । ३ जना नेपाली महिलालाई कुबेत पठाईदिन्छु भनि भारतको नयाँ दिल्ली पुर्‍याई एक अपार्टमेन्टमा ब’न्धक बनाएर राख्ने एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। गोरे भन्ने नर बहादुर श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन्।ऊनलाई मानव बे’चबि’खन अनुसन्धान ब्यूरोले असार ७ गते झापा मेची नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो। अनुसन्धान पश्चात उनलाई अदालतबाट पुर्पक्षको लागि कारागार पठाइएको ब्यूरोका प्रवक्ता गोविन्द थपलियाले जानकारी दिए।
हो हामी विदेशबाट नै आएको हौं । तर हामीले सरकारले तोकेको सबै नियम पालना गरेर, जाँच गरेर क्वरेण्टीनमा बसेर रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आएका छौं । तर यहाँ होम क्वरेण्टीनमा बस्दा आफ्नैले हामीसँग गरेको व्यवहार देख्दा उदेक लाग्छ । उनीहरुले त हामी नै कोरोना भाइरस हौं झैं व्यवहार गर्छन् । के विदेशबाट आउने सबै कोरोना भाइरस हुन र ? यस्तो त कतै भएको जस्तो लाग्दैन । तर यहाँ भएको छ ।विदेशबाट फर्कने पनि अलिकति बुझ्ने म जतिकोलाई गाह्रो नहोला । किनकी मैले मेरो समाज र म आफूलाई बुझेको छु । तर विदेशमा कामका लागि गएका तर दुःख सहेर, दुःखमा परेर आफ्नो घर आइपुग्नेलाई आफ्नैले यस्तो व्यवहार गर्दा कस्तो लाग्ला ?
परदेशमा पनि दुःख, स्वदेशमा पनि अपमान । कतिपयलाई तपाईँहरुले गरेकै व्यवहारले आ’त्म ह’त्या गर्न बाध्य बनाउन सक्छ । मानसिक त’नाव हुन्छ । स्थिति जस्तो पनि हुन सक्छ । त्यसैले म भन्छु, विदेशबाट फर्कने हामीलाई माया गर्न नसके पनि घृणा नगरौं ।विदेशबाट आउने हामीलाई सुरक्षाकर्मीदेखि स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैले माया, सदभाव अनि सकारात्मक सोचाइको विकास गराउनुभयो । विभिन्न क्रियाकलाप गराएर क्वरेण्टीनमा बस्दा हँसाउनुभयो । कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आउनमा सहयोग गर्नुभयो । कसैलाई स’ङ्क्रम’ण भएमा उपचारमा खटिनुभयो । कोरोनालाई जित्न सक्ने बनाउनुभयो ।
तर तपाईँहरुलाई नै गाउँ समाजमा गरिने व्यवहारले अचम्म लाग्छ । यस्तो अमानवीय व्यवहारले मन कस्तो हुन्छ होला ? अनि कस्तो मानसिक असर पर्छ होला रु म त सोच्न पनि सक्दिनँ । गाउँसमाजले एक पटक सोचोस् भन्ने लाग्छ मलाई ।हामी कोरोना नेगेटिभ भएपछि मात्र घरमा आएका हौं । किनकी तपाईँलाई जति आफ्नो स्वास्थ्यको माया छ, त्यति नै मलाई पनि मेरो परिवार र मेरो समाजको माया छ । तर म विदेशबाट आएको भन्दैमा बोलचाल नै बन्द गर्नुपर्ने अनि मेरो घरको आसपास नै आउन नहुने किन होला ? के नेपाली समाज अब यो अवस्थामा आइपुगेकै हो त रु हाम्रो मानवीय मूल्य, मान्यता, सामाजिक सद्भाव, भाइचारा कोरोनासँगै सकिएको हो त ?
गाउँ समाज अनि देश भनेको हामी आफैं नै हौं । त्यसैले विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि आफ्नो घर, आफ्नो परिवार सम्झेर आएका म जस्ता आम नेपालीलाई मानसिक त’नाव दिनुको सट्टा हौसला अनि सकारात्मक सल्लाह सुझाव दिए कति जाति हुन्थ्यो !कोरोना त्यस्तो जटिल रोग होइन भन्ने मलाई लाग्छ । सकारात्मक सोचाइ अनि राम्रो खानपानबाट यो रोगलाई सजिलै जित्न सकिन्छ । घर परिवार, गाउँ समाजबाट गरिने भेदभाव र अपमानले कमजोर बनाउँछ । त्यसैले विदेशबाट फर्किने हुन् या अरु कोही, कसैलाई पनि यस्तो विभेद नगरौं । सकिन्छ माया बाँडौं, सकिंदैन भेदभाव नगरौं । यो सामग्री उज्यालो अनलाइनवाट लिएका हौं
Prevयी४ राशि भएका मानिसलाई कसैको साथ मन पर्दैन
Nextअमलाको सेवन गर्नाले यस्ता रोगहरू जातिहुन्छन !
काठमाडौं बाहिर जान नयाँ नियम….! (सूचना सहित)
आकाशमै लामो समय बिताउने पाइलट जोडी ….!
ब्लड क्यान्सर पीडित २६ वर्षीया आस्था बोहरा बिकले उपचारका लागि सहयोगको अपील